Wasiirka cusub ee Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya oo xilka la wareegay[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasiirka cusub ee Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya oo xilka la wareegay[Sawirro]
MUQDISHO – Munaasabad ay xilalka kula kala wareegayaan Wasiirkii hore ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Khadro Axmed Ducaale iyo Wasiirka cusub ee dhawaan loo magacaabay Wasaaradda Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Munaasabada waxaa ka qeybgalay Ra’iisal Wasaare kuxigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar,Wasiir kuxigeenka,Wasiir dowlaha,xubno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Khadro Axmed Ducaale ayaa ka faahfaahin ka bixisay ugu horayn Waxqabadka Wasaaradda mudadii ay xilka haysay,waxay sheegtay in ay ku guuleysatay howlo badan oo horyaalay Wasaaradda.
Khadro Axmed Ducaale ayaa u mahadcelisay dhammaan mas’uuliyiinta la shaqeysay mudadii ay xafiiska joogtay iyo doorkii ay ku lahaayeen dardargelinta shaqada.
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Ganacsiga Iyo Warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa uga mahadcelisay Wasiir Khadra waxqabadkeeda,wuxuuna ballan qaaday in uu ku dadaali doono sidii loo horumarin lahaa waajibaadka shaqo ee horyaala.
Ugu dambeyntii,Ra’iisal Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed(Qadar) ayaa ku ammaanay Wasiirkii hore ee Wasaaradda Marwo Khadro Axmed Ducaale gudashada Waajibaadkeeda shaqo,wuxuuna dhanka kale kula dardaarmay Wasiirka cusub in waajibaadkiisa si hufan u gudto.